Tirada Ciidamada Burundi ee lagu dilay dagaalka Al shabaaab oo la shaaciyay – Somali Top News
Tirada Ciidamada Burundi ee lagu dilay dagaalka Al shabaaab oo la shaaciyay
Ciidanka dalka Burundi ee ku jira Howlgalka AMISOM ayaa maalinta berri ah ee 21ka Bishan billaabaya in qeyb ka mid ah ay ka baxaan Soomaaliya.
Cidamada Burundi ee ka howlgala Soomaaliya waxaa ay tiradoodu gaareysaa 5,432 Askari,waxaana ay ka midyihiin howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya.
Ciidamada Burundi ee ku geeriyooday howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa tiradooda lagu sheegay 800 ilaa 1,000 Askari sida ka muuqata lacagta magdhowga ah ee Midowga Afrika uu siiyo Waddadama askarta uga dhintaan Soomaaliya.
Wargeyska New Vision ee ka soo baxa Dalka Uganda ayaa sheegay in ciidamada Burundi ee ku geeriyooday Soomaaliya ay tiradoodu tahay 800 ilaa 1,000 Askari,waxaana uu is bar bardhig ku sameeyay lacagta Magdhowga ah ee ay Burundi ka heshay Midowga Afrika,taas oo gaareysa $18 Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Ciidamada Burundi eek u jira Howlgalka AMISOM ayaa 1,000 Askari oo ka mid ah waxaa ay berry billaabayaan in ay ka baxaan Soomaaliya,waxaana ay daabuliddooda soconeysaa ilaa 26ka Bishan.
Magacyada Askarta baxeysa ayey Burundi u gudbisay Midowga Afrika,waxaana sida qorshuhu yahay Ciidanka Burundi qeybta baxeysaa loo qabtay in ay Soomaaliya uga baxaan 28ka Bishan iyada oo la doonayo in labo maalmood ka hor waqtigaas ay isaga baxaan Soomaaliya.
Ciidamada ka socda Dalka Burundi waxaa ay ka howlgalaan Gobolka Shabeellaha dhexe oo ka tirsan Maamulka Hirshabeelle.
Ciidanka Burundi waxaa ay Soomaaliya qeybtii ugu horreysay soo caga dhigatay Bishii November ee sanadkii 2007dii,waxaana ka soo horreeyay kaliya dalka Uganda oo ay ciidankiisa ku jira AMISOM soo galeen Soomaaliya Bishii March 2007dii.
← Somali President praises Qatar’s support to development projects
Mas’uul katirsanaa xafiiska xeer ilaalinta Qaranka oo Muqdisho lagu toogtay →
Askari katirsan ciidamada Puntland oo dilay Suldaan Xasan Cali Jibriil
September 21, 2018 Somali Top News 0
Madaxweyne Farmaajo oo sii dheereystay safarkii uu maalmahan kaga maqnaa dalka
Bayaan ka soo baxay Madaxweyne Farmaajo oo looga hadlay arrimo kala duwan